Baro Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh
Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh iyo muuqaal qurux badan qeybtii 1 aad. Hadii aad isweydiineyso sida loo qoro erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh, waxaad timid halkii kugu habooneyd.
Tilmaamahani waxaad ku baran doontaa sida loo qoro erayo jaceyl ah, sida aad ku soo jiidan karto qofka aad jeceshahay, goorta aad u baahan tahay in aad isticmaasho erayo jaceyl, laakin inta aadan baran sida loo qoro erayo jaceyl waxaa muhiim ah in la fahmo sababta ay ahmiyada gaar ah u leedahay barashada erayo jaceyl.
Erayo jaceyl waxaa u baahan nolosha oo qof walbaa wuxu jecelyahay in la dhaho erayo qurux badan, sidoo kale lamaanuhu waxa ay u baahan yihiin erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh kuwaasoo kobcin karaaa xiriirka jaceyl ee ka dhexeeyo labada qofood.
Hadaba sidee loo qoraa erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh?
qeybtii 1 aad..
Jawigu waa mid aaad qurux badan, Jaceylkuna waa dareen aad u macaan. Dadku waxa ay dhahaan jaceylku sabab la,aan ayuu qalbigaada ku beermaa, haa haa waa run sababtoo ah sabab la,aan ayaad qalbigeyga dagtay.
Helitaanka jaceyl dhab ah in la helo ma ahan wax adag balse waxaa adag in la joogteeyo.
Weligeey ma dareemin jaceyl ilaa aan adiga ku arkay maahee, Saaxibtinimadu waxa ay horseedaa jaceyl, jaceylkuna wuxuu horseedaa nolol cusub.
Maalin kastaa oo aan adiga kula joogo waxa ay noqotaa maalinta ugu quruxda badan nolosheyda. Dadku waxa ay dhahaan jaceylku waa dab laakin aniga waxaan diyaar u ahay in aan wajaho dabkaaasi marba hadii aan adiga ku helayo.
Waxaan dareemay in aad tahay qofka aan dunida ka raadinaayay mudo badan, waxaad I bartay dhadhanka ay leedahay noloshu, waxaad isiisay farxad aan la qiyaasi Karin, waxaad dhameys tirtay riyadeydii qabyada ahayd, Sow ma ogid in aad tahay dhameystirkii nolosheyda, riyadii mustaqbalkeyga, rajadii nafteyda, farxadii qalbigeyga, aragtidii indhaheyga, dareenkii wadnaheyga, Runtii waxaa tahay ruux aan doortay aniga, dareenkeyga iyo qalbigeygu uu raacay.
Uma maleeyo in uu jiro ruux aan kugu doorsanaayo, intii daain uumay adigaan kaa doortay, u hadaaqdaa nafteydu.
Ma aqaano waxaaan ku dhaho mana aqaano waxaan kuugu mahadceliyo balse waxaan qirayaaa in aad tahay aduunkeyga oo dhan. Waxaan sidoo kale Qirayaa inaad tahay, Qofka i baray Jaceylka, Dulqaadka, Naxriista iyo Farxadda.
Waxaan ogahay in aan helay ruux ruuxdeyda u ah nolol oo aan weliba si, waali ah u jeclaaday.
Adigu waxaaa tahay tan ugu qaalisan aduunkeyga, tan ugu yaabka badan aduunkeyga iyo tan ugu quruxda badan nolosheyda.